Indlu entle yeScandi kufutshane ne-Edinburgh
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGrace
IWrennery yindlwana epholileyo yaseScandinavia ebekwe emazantsi ePentland Hills enomlinganiswa omkhulu. Nangona ikwindawo yasemaphandleni, indlwana yimizuzu engama-20 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye nemizuzu engama-30 ukusuka kumbindi wesixeko sase-Edinburgh. Ihonjiswe ngokungcamla ngeembono ezimangalisayo, le ndawo ilungile kwizibini ezitshatileyo, abantu abahamba bodwa, kunye nabahambi beshishini. Kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye nebhedi ephindwe kabini yesofa. Abantwana bamkelekile ukuba bahlale, nangona kunjalo, igumbi lokulala lifikeleleka ngeleli eneziporo.
Ipropathi yindlu entle evulekileyo yeplani, enegumbi lokulala elivulekileyo kwinqanaba le-mezzanine elifikelelwa ngezinyuko zeleli. Inikwe umgangatho ophezulu kwaye ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile. Ukuba kukho nantoni na ethile ongathanda ukuba ixhotyiswe ngayo-nceda ubuze kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukulungiselela isicelo sakho. Qaphela: ngenxa yendawo ye-WIFI kunye nesignali yeselula ingaba ne-patchy ngamanye amaxesha.
4.94 · Izimvo eziyi-117
INine Mile Burn yindawo encinci ebekwe emazantsi ePentland Hills enezixhobo ezahlukeneyo zasekhaya ezikufutshane kwezinye iilali ezithandekayo. Kuthuleke ngokugqithisileyo kunye negcuntswana lezinye iipropathi kwindawo elawulwa yifama.
I-West Linton, ekumgama wemizuzu emi-5 inezinto ezilungileyo zasekhaya ezibandakanya ivenkile encinci ye-Co-op kunye ne-deli yamalungiselelo abalulekileyo kunye neposi, ivenkile yeencwadi, ibhanki kunye nekhemesti. Ukufumana iti kunye ne-scones, yiya e-Olde Toll Tea House kwilali, okanye kwisidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa i-Gordon Arms pub ihlala kufutshane nemveliso yasekuhlaleni enencasa kwibhari okanye kwindawo yokutyela. Kwisidlo sangokuhlwa, i-Old Bakehouse inegama eliphezulu le-ambience yayo eqhelekileyo kunye nokutya okukumgangatho ophezulu kwaye ilungele isidlo sothando sababini.
Iimayile ezimbini ukusuka kwiNine Mile Burn uya kufumana iWhitmuir Organics enevenkile yekofu kunye nevenkile yokutyela kwaye ungathenga inyama emnandi, iziqhamo kunye nemifuno emitsha efama. Yonke into esevenkileni inokuhanjiswa, kutheni ungaziphathi kwaye ulungiselele ibhokisi emnandi yezinto eziphilayo ukuba iziswe kwikhaya lakho leholide kwangaphambi kokuba uhlale. Ngenye indlela, uluhlu lwabo 'lwenziwe ngokuLungileyo Apha' lweepayi ze-steak, iipayi zabelusi, i-pate, i-jam, amaqebelengwane kunye ne-chutney zinokunceda ukwenza ukutya kwakho kweeholide kube nzima.
Uluhlu olukhulu lwezinto eziluncedo, ii-pubs kunye neeresityu, iimayile ezi-4 ziyakusa ePenicuik okanye iimayile ezili-14 ukuya kwiidolophu ezintle zentengiso yasePeebles okanye iBiggar.
Le ndawo yindawo ethandwayo yokuhamba kwaye kukho inani elikhulu lokuhamba ngendlela ephawulweyo kwaye ujikeleze iPentland Hills. Ukuqala kanye emnyango, iLyne Water kunye neBroomlee Hill yindawo ekulula ukuyiyeka i-2.5 yeemayile iqala ngobunono ecaleni kwaManzi eLyne kodwa ngomzamo omncinci othe kratya ofunekayo njengoko isingise kwiNduli yaseBroomlee. Kungenjalo i-Baddingsgill ibandakanya ukuhamba okuphakathi kweemayile ezi-5.5 ukuya e-Pentlands ukusuka e-West Linton inika iimbono ezintle zepanoramic endleleni. Kukho ukuhamba okuncinci okujikelezayo okujikeleza iNine Mile Burn kunye neCarlops.
Umtsalane wasekhaya ojikeleze lo mmandla ubandakanya iRosslyn Chapel kwilali yaseRoslin (iikhilomitha ezisibhozo) eyaqala ngo-1446. Ibonakaliswe ngokugqwesileyo kweyona ithengisa kakhulu iDa Vinci Code, lo mtsalane welifa lemveli ube sisihloko kwiithiyori ezininzi ezingaqondakaliyo kubandakanya iKnights Templar. kunye neGrail eNgcwele. Indawo enika umdla, imbali enika umdla!
Ukukhwela ibhayisekile, ihlathi elihle eGlentress (iikhilomitha ezili-13) yindawo ebalaseleyo yokukhwela ibhayisekile entabeni eneendlela eziya kuthi ilungele yonke iminyaka kunye nobuchule. Ngeziko elitsha leendwendwe ezixabisa i-8.5 yezigidi zeedola, linayo nekhefi, ukuqesha ibhayisekile kunye nomyalelo okhoyo kodwa unamathuba amahle okuhamba kunye nezilwanyana zasendle nazo. Kwaye kulonwabo oluvuyisayo oluziimitha ezingama-40 ngaphezulu komgangatho wehlathi, kukho iingcingo ze-zip kunye ne-adventure ephezulu yemithi kufutshane neGo Ape.
Ngento eyahlukileyo, kutheni ungayi eVelvet Hall ukuya kudibana kwaye uhambe kunye neAlpacas kwiTweed Valley. Apha unokuhamba phakathi kwamahlathi abukekayo kunye neencopho zeenduli ngeAlpaca yakho yenkampani. Iyadlala, inomdla kwaye iyathandeka ngokwenene.
Kumdlalo wegalufa, kukho ibala elinemingxuma eli-18, par 69 ikhosi ye-moorland kumda we-West Linton eya kucela umngeni kwaye yonwabe ngokulinganayo. Ikhosi ineembono ezimangalisayo zamaphandle ajikelezileyo kwaye inevenkile yepro kunye neengcali ezimbini zegalufa ukuba umtsha kumdlalo okanye ujonge ukulola ujingi lwakho.
Ngaphandle kwendawo esemaphandleni enoxolo, uthungelwano lwemoto lunokufikelelwa ngaphantsi kwemizuzu eli-15 ngemoto kwaye luvumela ukufikelela lula e-Edinburgh nako konke esi sixeko sihle sinokukubonelela. Kungenjalo, tsibela kwibhasi yasekhaya ezakusa esixekweni ngaphantsi kweyure. Apha ungaphonononga uyilo olunomdla lwedolophu yakudala kwaye ucofe inkcubeko kunye nelifa lemveli yesi sixeko sihle. Zulazula kwiindawo ezivaliweyo ezivaliweyo kunye nezinyuko ezimxinwa zeRoyal Mile kunye neGrassmarket; thatha ukhenketho kumagumbi angaphantsi komhlaba esixeko esidala; ukonwabela umoya woMnyhadala we-Edinburgh Fringe okanye umnyhadala weJazz & Blues owahlukileyo, okanye undwendwele eyona ndawo idumileyo - iNqaba yase-Edinburgh.
Kungenjalo ukufuna umsebenzi othe kratya, iMidlothian ineyona ndawo inkulu yomileyo yokutyibiliza ekhephini eYurophu e-Hillend, iimayile nje ezili-15 ukusuka eWest Linton, kwaye iimayile ezimbalwa ukuya emantla ziyakusa kwi-Edinburgh International Climbing Arena eRatho apho unokufumana khona ukunyuka, ukwehla kunye nokunyuka. ukumatye kunye neyona khosi iphezulu yohlaselo lwasemoyeni ngaphakathi e-UK.
Indlu enkulu ehlala ecaleni kwe (kodwa kude) le propati kuhlala ngabazali bam abaya kuba bekhona ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo yakho, izinto ozifunayo njl.njl kwaye sihlala i-10 mins kude. Siyaqhagamshelwa ngomnxeba ngalo lonke ixesha.
Indlu enkulu ehlala ecaleni kwe (kodwa kude) le propati kuhlala ngabazali bam abaya kuba bekhona ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo yakho, izinto ozifunayo njl.njl kwaye sihlala i…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nine Mile Burn